परम्परागत जौ अंकुरण र औद्योगिक जौ अंकुरण-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
परम्परागत जौ अंकुरण र औद्योगिक जौ अंकुरण
औद्योगिक जौको अंकुरणले काठको फावडा हटाएको छ र स्वचालित घुमाउने ब्लेडहरूद्वारा फावडा जौमा बदलिएको छ।
अब औद्योगिक माल्टिङले माल्टिङको परम्परागत तरिकालाई लगभग विस्थापित गरेको छ। केवल केही डिस्टिलरहरूसँग सुविधा वा आर्थिक कारणहरूको लागि अझै पनि आफ्नै जौ बिरुवाहरू छन्। वास्तवमा, यी डिस्टिलरहरूले घरमा माल्ट उत्पादन गर्न जौको 10-30% मात्र राख्छन्। डेस्टिलरीमा माल्ट उत्पादनमा जोड दिनुको मुख्य कारण ऐतिहासिक परम्परालाई निरन्तरता दिनु वा पर्यटन स्रोतको विकास गर्नु हो ।.
विज्ञहरू सर्वसम्मतिले विश्वास गर्छन् कि औद्योगिक माल्टिङले प्रत्येक माल्टिङ प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ, जसले माल्टको वृद्धिलाई थप एकसमान बनाउन सक्छ। त्यसैले आजकल जौबाट माल्ट बनाउने काम सामान्यतया व्यावसायिक जौ अंकुरण कारखानाबाट हुने गरेको छ ।
तीन बाँदरको कथा
तीन बाँदर "बाँदर काँध" व्हिस्कीको नाम हो, तर बाँदर र व्हिस्कीको सम्बन्ध के हो? स्कटल्याण्डको स्पेसाइडको डफटाउनबाट हेरौं। जसलाई "विस्कीको विश्व राजधानी" भनिन्छ। आफ्नो रमाइलो समयमा, योसँग नौ डिस्टिलरीहरू पनि थिए, र त्यहाँ हाल छवटा डिस्टिलरीहरू छन्। त्यतिबेला सहरका धेरै मानिसहरूलाई अनौठो रोग थियो, तिनीहरूका हातहरू कमजोर र ढिलो भएका थिए। र तिनीहरूको रोग हतियार देखि बाँदर जस्तै हिँडे। किनभने ती डिस्टिलरी कामदारहरूले हावाको मौसममा जौ फाल्ने काम जारी राख्नुपर्छ, जसले हतियारको जोर्नी दुख्ने गर्छ। मेसिन बिनाको समयमा, मानवले यी कामहरू कृत्रिम रूपमा मात्र गर्न सक्थे। यी परिश्रमी कामदारहरूको सम्झनामा, स्थानीय डिस्टिलरीले व्हिस्कीलाई "तीन बाँदरहरू" नाम दिए।
अघिल्लो: बियर र व्हिस्की बीच के सम्बन्ध छ?
अर्को: व्हिस्की डिस्टिलेसनको समयमा डिस्टिल्ड रक्सी सङ्कलन गर्ने तीन चरणहरू